Naya Post Nepal | पाथिभरा माताले सबैको र’क्षा गरुन, पुस १५ गते बिहिबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुहोस राशिफल
पाथिभरा माताले सबैको र’क्षा गरुन, पुस १५ गते बिहिबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुहोस राशिफल
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) प्रेमी प्रेमिकाको बिच सामान्य मनमुटाब रहन सक्छ । ब्यापार ब्यवसाय को क्षेत्रमा मध्यम दिन रहेको छ । तपाईले कसैमाथी गरेको बिश्वासमा बि’श्वस’घा_त हुन सक्छ । सामान्य कार्यमा अधिक श्रम र समय ब्यतित हुन सक्नेछ । पारीवारिक साथ सहयोग प्राप्त रहनेछ । अध्यन अध्यापनमा समय उत्तम रहेकोछ ।
बृष राशि (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) आजको सामान्य खर्चले भोलिलाई फाईदा मुलक हुनेछ । प्रिय ब्यक्ति को भेटले मन प्रशन्न रहला । मनमा चन्चलताले बास गर्नाले सहि निर्णय गर्न नसकीएला । प्रतिस्पर्दाजन्य कार्यमा सजग रहनु उत्तम रहनेछ । स्वास्थमा सामान्य तनाव उत्पन्नहुन सक्नेछ । तात्कालिन आ’र्थिक अभाबको सामना गर्नु पर्नेछ ।
२०७८ पुष १५, बिहीबार प्रकाशित 1 Minute 265 Views